इन्धनको मुल्य बढेसँगै हवाई भाडा बढ्यो ; हे’र्नुहोस् अब कताको कति ? – Sadhaiko Khabar
इन्धनको मुल्य बढेसँगै हवाई भाडा बढ्यो ; हे’र्नुहोस् अब कताको कति ?
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत्र ०६, २०७७ समय: २०:१६:२५
काठमाडौं/ नेपाल आयल निगमले हवाई इन्धनको मूल्य बढाएसँगै हवाइ सेवाप्रदायक कम्पनीले हवाई भाडा बढाएका छन् । वायुसेवा सञ्चालकको छाता सङ्गठन वायुसेवा सञ्चालक सङ्घले बढेको इन्धनको मूल्यअनुसार भाडा वृद्धि गरिएको जनाएको छ ।